XOG: Kheyre oo diiday in maleeshiyaadka hubeysan laga saaro dhufeysyada kana hor yimid dadaallada Nabadda | Allbanaadir Media
Home Warka Maanta XOG: Kheyre oo diiday in maleeshiyaadka hubeysan laga saaro dhufeysyada kana hor...
Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo kamid ah xubaha midowga Musharaxiinta kuwooda ugu mayalka adag aadna u hubeeyay maleeshiyaad ay isku beel yihiin ayaa ka hor yimid dadaalo nabadeed.
Kheyre ayaa 100,000$ ku bixiyay hubka, gaadiidka iyo saanadda ay isticmaalayaan ciidamada hubeysan kuwaa oo xaafado kamid ah magaalada Muqdisho go’doomiyay islamarkana qalqal ku haya shacabka Muqdisho.
Ra’isul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale kumanaan kun oo Doller ku laaluushay Taliyeyasha ciidamada maleeshiyaadka ah ee ku sugan aaga sayidka ilaa Siigaale si ay arbushaad amni uga sameeyaan caasimadda.
Talyeyasha oo kala ah Gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuukar Ali (JACFAR) General Qataatoow iyo taliyihii hore ee Danab Ismaaciil Gureey, waxaana uu Kheyre dhex dhigay 100K oo Dooler si ay dowladda u weeraraan maleeshiyaadka ay wataan islamarkana magaalada Muqdisho u burburiyaan.
Xasan Kheyre ayaa ka hor yimid dadaalo nabadeed oo ay wadaan Odiyaasha dhaqanka kuwaa oo ku qancinaya in ciidamada laga saaro magaalada balse Kheyre ayaa dalabkaas diiday xili ay inta badan ogolaadeen Taliyeyasha ciidamada kale ee ku sugan Mirnaanyo iyo madaxdooda si loo ilaaliyo nabadgalyada caasimadda umadda Sooomaaliyeed.
Waxaa kaloo xusid mudan in Kheyre uu dabada kawato dowlado shisheye kuwaa oo taageero dhaqaale uu ka helo.